Ball Ukuthela Abakhiqizi Besilayidi & Abahlinzeki | Angeza
Ibhola eliphethe amaslayidi liyifenisha efanelekile ebaluleke kakhulu ekuvuleni noma ukuvalwa kwekhabethe. Isigaba se-Adduth sojantshi wesilayidi sifaka lonke uhlobo lwama-slides anezinhlamvu ezintathu kanye nama-slides athambile, ama-Slide Drawer Slide, i-FGV Box Slides, I-FGV Dracker Slides, I-Slide Drawer Slides, Sifihliwe Isilingi njll , nakanjani singakuthola okudingayo ngempela.
I-addith ibhola ethwala ama-slide enziwe ngensimbi egqamile ephezulu noma insimbi engenacala,I-Exquisite Craft Galvanization, i-Double-Lawer Survate Treatment Reviving ukudonsa futhi hhayi ukugcwaliswa kalula.
Kufaka isicelo sezinto zokuqina zekhabethe futhi usebenzisa amabhola ensimbi aqinile, ubuciko obukhulu bokuthi uqhubeke ujantshi wangaphandle futhi ojantshi wangaphakathi. Ngokuhlola okuqinile kwekhwalithi, kungadonswa kalula izikhathi ezingaphezu kuka-50 000, futhi kungasekela izinto ngesisindo esingaphansi kwama-25 kg kanye nengxenye yesilayidi sosayizi esingakwazi ngisho ne-25kg. Futhi ukudonsa ikhabethe, kuzothintwa yi-buffer evala kancane ikhabethe ngesikhathi sokucindezela ikhabethe emuva. Singanikeza izinketho ezahlukahlukene zokukhetha imibala, futhi ukuxhaswa okuhlukile kwezinto ezibonakalayo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende emazingeni ahlukene. Isicelo se-Multi-Scene, elungele ukusetshenziswa kwamakhabethe asindayo kakhulu anjengewadi, amabhuki, amatafula aseceleni kombhede, amadeski wekhompyutha, njll.